Mwedzi wapera, Microsoft yakawedzera zvinoverengeka zvitsva maficha kune yayo Microsoft Teams sevhisi. AI-yakavakirwa ruzha kudzvanyirira, Polls rutsigiro mumisangano, Pamwechete Mamodhi maficha, kufona kubatanidza rutsigiro uye zvakanamirwa mbiru ndizvo zvimwe zvezvinhu zvitsva zvakawedzerwa munaNovember. Nhasi, Microsoft yakaratidza ruzere runyorwa rwezvinhu zvitsva zvakawedzerwa kuMicrosoft Teams mumwedzi waNovember. Unogona kuvawana pazasi.
Chii Chitsva: Misangano
AI-based ruzha kudzvinyirira
Yedu chaiyo-nguva AI ruzha kudzvinyirira ficha inongo bvisa isingadiwe kumashure ruzha panguva yemisangano yako. Iyo AI-yakavakirwa ruzha kudzvinyirira inoongorora yako odhiyo feed kusefa kunze kweruzha uye kuchengetedza chete yekutaura chiratidzo. Iwe unogona zvakare kudzora kuwanda kweruzha rwekudzvinyirira iwe kwaunoda, kusanganisira iyo yakakwira marongero ekudzvinyirira mamwe kumashure ruzha Dzidza ZVIMWE
Nyowani Pamwe Pamwe mode mamiriro sarudzo
Pamwe chete modhi inofungidzira zviitiko zvekusangana kubatsira vatori vechikamu kuti vanzwe vari padhuze pamwe chete kunyangwe paunenge wakaparadzana. Isu tinofara kuunza nyowani Yekutanga mode mamiriro masarudzo ekutakura timu yako kune akasiyana maseteni. Sarudza chiitiko chekumisikidza inzwi uye gadzira yakasarudzika chiitiko chemusangano wako, ingave iri diki musangano wekamuri yemusangano, kana musangano wemaoko-ese wakaitirwa mune yemitambo yekunze.
Polls muTeam Misangano
Mapolls mumisangano yetimu chiitiko chisina musono chakapihwa simba nemaFomu ayo anokubatsira kuitisa misangano inobata uye inobudirira. Semurongi wemusangano kana muratidziri, unogona kugadzirira, kuvhura, uye kuyedza mapota musati, panguva, uye mushure memisangano, zvichiteerana. Vako varipo vanogona kuona uye kupindura kumavhoti mune pop-up bubble kana chat pane. Kugonesa chimiro ichi semurongi wemusangano kana muratidziri, ingo wedzera iyo Fomu app seye tebhu mumusangano wako wemaTimu. Dzidza zvimwe.
Yakazara skrini kutsigirwa mumisangano mitsva chiitiko
Takunzwa iwe, yakazara screen mode yadzoka! Iine yakazara skrini mode pane Windows hwindo remusangano rinozadza chidzitiro chose, kubvisa zvese zvimwe zvinhu zvechiso, kusanganisira bha yemusoro pamusoro uye task bar pazasi. PaMac OS, yakazara skrini mode inowedzera hwindo remusangano uye zita remusoro rakavanzwa. Izvi zvinokubatsira kuti udzikise zvinokanganisa uye tarisa kutarisisa kwako.
Tanga musangano wepakarepo kubva pafoni yako
Iwe zvino uchazowana inozivikanwa Yekusangana izvozvi icon pane iyo kalendari tebhu uye muTeam chiteshi ichikubatsira iwe kubatana nechikwata chako ipapo ipapo. Ukangotanga musangano wako, unogona kushandisa chero mameseji app pane yako nharembozha kuti ugovane kukoka kana kuwedzera vatori vechikamu zvakananga kumusangano, uye chero munhu ari muTimu chiteshi anogona kujoina pasina kukoka.
Yakagadziridzwa dhizaini yemisangano pane iOS
Isu tavandudza ruzivo rweTimu pane zvishandiso zveIOS nenzira nyowani yekuratidzira, kugona kuona vamwe vatori vechikamu, uye kugona kuona zvirimo zvakagovaniswa uye mutambi anotariswa panguva imwe cheteyo.
Chii chitsva: Kufona
Paunenge uri parunhare nemumwe munhu (kana boka), ungangoda kuwedzera imwe nyanzvi kuti itore chikamu mukufona. Saizvozvowo, unogona kugamuchira runhare runouya zvine musoro kuti ubatanidze neyauri watove. Kufona Kubatanidza kunopa vashandisi vekupedzisira kugona kubatanidza maTeam VoIP uye PSTN anoshanda 1-1 kufona mune imwe 1-1 yekufona kana rimwe boka rekufona. Iwe unogona kusanganisa mafoni ako, nekungosarudza iyo "…" (zvimwe zviito) bhatani kubva pane zvinodzora kufona uye sarudza "batanidza mafoni". Dzidza zvimwe.
Anogona Kupukunyuka Bazi Midziyo
Kutsigira nhaurirano dzakakomba zvakanyanya kana paitika kubuda, iyo itsva Survivable Branch Appliance (SBA) inokutendera iwe kuti ugadzire uye ugamuchire PSTN mafoni kunyangwe muchiitiko chekutadza kweWAN. Iyi SBA yave kuwanikwa kune vanozivikanwa Session Border Controllers (SBC) vatengesi, ichibvumira maSBCs kubatana neTeam mutengi mune chiitiko mutengi asingakwanise kusvika kuMicrosoft Calling network.
Nokia Session Border Mutongi chitupa
Ericsson yakapedza chirongwa cheSession Border Controller (SBC) chitupa, icho chinoona kuti SBC yavo inotsigira Direct Routing yeMicrosoft Teams, ichijoinha rondedzero yeSBC dzakazivikanwa. Izvi zvakaomarara chitupa maitiro [isa chinongedzo pano] inosanganisira yakasimba 3rd bato kuyedzwa uye kusimbiswa mukugadzirwa uye pre-kugadzirwa Direct Routing nharaunda. Direct Routing inobvumidza vatengi kubatanidza avo vega vatakuri uye zvivakwa neFoni Sisitimu kugonesa Matimu Ekufona. Dzidza zvimwe.
Chii Chitsva: Midziyo
Microsoft Matimu anoratidza
Microsoft Teams inoratidzira chikamu chitsva chevose-mu-imwe yakazvitsaurira maTimu madhijitari ayo anoratidzira ambient yekubata yegirazi uye isina-ruoko ruzivo rwunofambiswa neCortana. Aya madhijitari anobatana nePC yako, ichipa nyore kuwana maTeam chat, misangano, kufona, karenda, uye mafaera. Nemutauro wechisikigo, vashandisi vanogona kukumbira Cortana kujoinha uye kuuya mumisangano, kuraira mhinduro kumusangano wemaTimu, nezvimwe. Dzidza zvimwe.
USB mbozhanhare naYealink: MP50
Iyo plug uye yekutamba fomati yeiyo ichangobva kuwanikwa MP50 neYealink inopa nzira nyowani yekuona maficha maficha muTimu, ichikubvumidza iwe kuti ubatanidze foni kuPC yako uye wotanga kuita mune yakazara foni mashandiro ipapo ipapo. Iyo MP50 inopa inodhura-sarudzo, ichikupa yechinyakare ruoko ruoko neyakavimbika maTimu bhatani, yekukurumidza kusangana uye kufona kujoina, pamwe ne USB neBluetooth kubatana kune ese ari maviri mafoni uye PC.
Yealink A20 inosanganisirwa, Android-yakavakirwa Microsoft Matimu Kamuri yakagadzirirwa mamakamuri madiki emisangano uye nzvimbo dzakakomberedza. Iyo A20 inoburitsa premium odhiyo uye vhidhiyo zviitiko kuburikidza ne20-megapixel 133-degree yakatwasuka munda wekutarisa lens, 8 MEMS maikorofoni akarongeka uye yakavakirwa-mukati mutauri. Iyo A20 iri nyore kuendesa uye inounza Matimu Rooms maficha senge isina waya kugovana zvemukati uye whiteboarding, kunzvimbo diki dzemisangano.
Poly Sync 20 USB / Bluetooth® smart speaker foni ikozvino yakasimbiswa yeMicrosoft Teams
Poly Sync 20 ndeye inotakurika yemunhu mutauri mbozhanhare yakasimbiswa yeMicrosoft Teams iyo inounza huru odhiyo kumisangano yako pamwe nemumhanzi. Yakasanganiswa nemaawa anosvika makumi maviri enguva yekutaura, kugona kubhadharisa yako smartphone uye IP20 guruva uye kuramba kwemvura, ishamwari yakanaka yevashandi vehybrid. Dzidza zvimwe.
Zvitsva zvitsva zvinobudikira kuMicrosoft Teams Rooms uye Surface Hub
Iyo ichangoburwa app yeMicrosoft Matimu Makamuri pane Android, vhezheni 1.0.94.2020102101, yave kuwanikwa kuburikidza neTimu Yekutonga Center. Zvitsva zvitsva zvatangawo kubuda kuSurface Hub! Zvimiro zvinogoneswa kuburikidza neiyi yekuvandudza zvinosanganisira:
Microsoft Matimu Makamuri pane Android
Tsigiro yemaviri skrini: Iye zvino unogona kushandisa Matimu eMakamuri pane Android munzvimbo dzine mbiri yekumisikidza skrini, ichibvumira kuti skrini imwe itariswe pamusangano wevatori vechikamu mune iyo gallery yekutarisa, nepo kechipiri skrini ichizoshandiswa kuratidza zvemukati kana chena bhodhi.
Maonero matsva egalari: Matimu Makamuri pane Android ikozvino inotsigira iyo 3 × 3, hombe gallery, uye Pamwe Mode mamiriro ekuona.
Auto-mhinduro kumisangano: Mune zvimwe zviitiko zvemusangano panotumirwa maturusi emaTembiMakamuri, senge imba yevarwere yehutano, musangano wevatori vechikamu vanoda kukwanisa kubatana neinopinda foni vasingatore danho rekuigamuchira. Zvino, isu tiri kupa mamiriro anotendera mafoni kuti apindurwe otomatiki. Iyi ficha nyowani inogona kuve inogoneswa kuburikidza neAdmin marongero.
Pamwechete mode: tarisa musangano wevatori vechikamu mune iyo nyowani Yekuita modhi, iyo inounza munhu wese munzvimbo yakagovaniswa nzvimbo.
Makuru gallery: tarisa kusvika makumi mana nevatanhatu vemusangano vatori vechikamu panguva imwe chete mune yakazara skrini mode,
mune nyowani 7 × 7 vhidhiyo gridhi.
Chii Chitsva: Chat & Kubatana
Chengetedza ruzivo rwakakosha ruwanikwe nyore uye pamusoro pendangariro neMicrosoft Teams. Iwe unogona kubaya chero meseji mune chiteshi, uye inowoneka mukaneru ruzivo pane pane kuti nhengo dzese dzechiteshi dzione.
Dzimwe sarudzo dzekushandisa mapurisa, ongororo & zvinyorwa mukati meTimu
Nyore kuunganidza ruzivo kana chengeta zvinhu mune chat uye mageru ane matsva maapplication maapolls, ongororo, uye mazita ekutarisa muTimu. Kamwe yaiswa uye kugadziridzwa nevatungamiriri veTimu, aya mameseji ekuwedzera anopa nyore uye inonzwisisika ruzivo kune vashandisi pamapuratifomu ese pasina chikonzero chekushandisa bato rechitatu.
Kurumidza gadzira uye utumire mapurisa kuti aunganidze mazano ekuita sarudzo
Gadzira zvirinyore kuongorora kuti uwane mhinduro kuti uvandudze maitiro ako.
Shandira pamwe nechikwata chako uye chengeta zvinhu zviri mugwara nekugadzira yakatarwa yekutarisa.
Gadza kuvapo kwemamiriro ekureba
Ita kuti vamwe vazive kana iwe uchiwanikwa muTimu nekugadzirisa mamiriro ako ekuvapo. Vashandisi vanogona ikozvino shandura yavo yekuvapo chinzvimbo kune yakatarwa nguva. Dzidza zvimwe.
Android Pane-Kudiwa Chat Shanduro
Inline meseji dudziro inopa yako ese nhengo dzechikwata izwi uye inofambisa kubatana kwepasirese. Nekungodzvanya zvakapusa, vanhu vanotaura mitauro yakasiyana vanogona kutaurirana zvine mutsindo nekushandura zvakatumirwa muzviteshi uye kutaura.
Chii Chitsva: Power Platform uye tsika kusimudzira
Gadzira mhinduro nePower Apps mumaTeam
Iyo nyowani Power Apps app yeTimu ikozvino yave kuwanikwa. Iyo inokutendera iwe kuvaka uye kuendesa tsika tsika pasina kusiya Matimu. Iine yakapusa, yakadzvanywa graphical app studio, haina kumbobvira yakave nyore kuvaka yakaderera kodhi maapplication emaTimu. Iwe unogona zvakare kusunga pakarepo kukosha kubva kune yakavakirwa mumatemplate senge Great Pfungwa kana Inspections maapplication, ayo anogona kutumirwa mune kamwe chete uye akagadziridzwa nyore. Iyo nyowani Simba Mapurogiramu app emaTimu anokwanisa kutsigirwa neiyo nyowani yekudyidzana dhatastore - Dataverse yeMatimu. Dzidza zvimwe.
Nyowani Simba Rongedza App yezvikwata
Iyo nyowani Simba Rongedza michina yeTimu ikozvino yave kuwanikwa. Iyo nyowani app inoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kuti zvishongedze workflows mukati mezvikwata. Neyakareruka kuyerera dhizaina, iwe unogona nyore kuvaka kuyerera nekusarudza kubva kune akati wandei matemplate uye nekungosarudza zvaunogona kubva pakudonhedza mamamenyu Zvakare, iyo skrini yekumba yeiyo nyowani app inovandudza kuoneka kwako mune yako kuyerera uye ngatitarise yako kuyerera kweTimu kubva ipapo. Dzidza zvimwe.
Power Virtual Agents (PVA) emaTimu
Power Virtual Agents (PVA) emaTimu izvozvi zvave kuwanikwa. Kubva zvazivisa iyo PVA preview kuIgnite 2020 vashandisi vawana mabhu chat anobatsira zvakare nyore kugadzira uye isu takaona zviuru zvemabhoti zvakagadzirwa mumavhiki mashoma apfuura. Isu tave kupawo mamwe maficha anosanganisira echisikirwo echokwadi, uko bots inogona kugadzirirwa kupa ruzivo kune vashandisi zvichibva pane kwavo kuzivikanwa. Iwe unogona ikozvino zvakare kuita nyore kuti bot yako iwanikwe kune vako vechikwata uye uve nemvumo ye admin kuti iite kuti iwanikwe kune iyo yese sangano.
Matimu maapplication emisangano izvozvi anowanzo kuwanikwa
Matimu emaapps emisangano ave kuwanikwa kazhinji neanosvika makumi maviri maapplication muTeams app chitoro, saAsana, HireVue, Monday.com, Slido, uye Teamflect, pamwe neanozivikanwa maMicrosoft maapplication senge Mafomu. Dzidza ZVIMWE. Kana iwe uri mugadziri, dzidza zvakawanda nezve kugadzira maTimu maapplication emisangano.
Tsigiro yeSain Sign-On (SSO) yeMabhoti
Isu tinofara kuti Imwe Sign-on (SSO) tsigiro yemabhoti yave kuwanikwa. SSO kuvimbiswa muAzure Active Directory (Azure AD) kunoderedza huwandu hwenguva dzinoshandiswa nevashandisi kuisa zvitupa zvavo zvekupinda nekuzorodza chinyararire chiratidzo chechokwadi. Kana vashandisi vakabvuma kushandisa yako app, ivo havazofanirazve kubvumazve pane chimwe chishandiso uye vanozosaina mukati mavo. Dzidza zvimwe.
Microsoft Teams App Kuvandudza Dambudziko
Tiri kuramba tichironga zviitiko zvitsva uye nzira dzekubatana nenharaunda yekuvandudza. Semuenzaniso, Microsoft iri kuvhura Microsoft Teams App Development Dambudziko. Kutanga Mbudzi 16, 2020 kusvika Kukadzi 8, 2021, vanogadzira, vanobatsirana, uye nemasangano vanogona kutora chinhanho kukudziridza nyowani uye inyowani Teams App yekutsikisa kuAppSource, kuve vanokodzera kuhwina mugove we $ 45,000 mumari uye mibairo. Kuti uwane yakazara dambudziko ruzivo shanya http://microsoftteams.devpost.com
Mwedzi uno iyo Zvino Virtual Agent app neSevhisiNow inoratidzira hunyanzvi hunyanzvi hunobatsira kusimudzira kugadzirwa kwevashandi nekunamatira kuzvishandira uye nekukurumidza kesi resolution - ichikubvumidza iwe semushandisi kuendesa zvikumbiro zvekutsigira, tarisa mvumo yetikiti rakavhurika, ita zviyeuchidzo, taurirana nevamiriri chaivo. nerubatsiro rwe otomatiki, kana kururamisa kutaurirana pakati pevamiririri nevashandi - vese vachiri kugara mukuyerera kwebasa muTimu.
Chii Chitsva: Management
Manejimendi manejimendi otomatiki kunyevera muTeam Admin Center
Manejimendi manejimendi otomatiki kunyevera inopa kwakawanda kushanda mukuziva madhijitari nyaya nekukonzera zviziviso zvinogona kushandurwa kuita pakarepo kururamisa chiito.
Chii Chitsva: Matimu eDzidzo
Ruzivo mukati memakirasi uye nekuona zviitiko zvevadzidzi
Unyanzvi hutsva muInsights hunokubatsira iwe semudzidzisi kuti unzwisise kubatanidzwa uye kufambira mberi kwevadzidzi nekufamba kwenguva uye mukati memakirasi ako. Zvino, vadzidzisi vanogona kuona epamusoro-soro maitiro mukati memakirasi, sevadzidzi vasina basa, vadzidzi vanoshanda pazuva, vakapotsa online makirasi uye vakapotsa migove. Uye mukati mekirasi, makadhi matsva anotarisisa anoratidza maitiro evadzidzi echikoro mudzidzisi angangoda kutora matanho. Dzidza zvimwe.
Chii Chitsva: Yekutanga Vashandi
Shift kuronga rubatsiro
Shifts kuronga rubatsiro runochenjedza mamaneja kana kunetsana kukaitika chero kupi muchirongwa uye ivo vanogashira nyevero dzekupokana kana vachibvumidza shanduko shanduko zvikumbiro. Kuchenjerera uku kunochengetedza mamaneja nguva, kunoita kuronga kwekuchinja kuti kuve kwakanyanya uye kunoderedza zvisirizvo zvinotungamira kune vashandi vasingasvike pakuchinja kwavo. Dzidza zvimwe.
Chii Chitsva: Hurumende
Aya maficha aripo parizvino kune vatengi veMicrosoft vekutengesa munzvimbo dzinoverengeka dzemakore-gore rava kutenderera kune vatengi vedu muUS Government Community Cloud (GCC), US Government Community Cloud High (GCC-High), uye / kana United States department reDziviriro ( DoD).
Takunzwa iwe, yakazara screen mode yadzoka! Iine yakazara skrini mode pane Windows hwindo remusangano rinozadza chidzitiro chose, kubvisa zvese zvimwe zvinhu zvechi skrini, kusanganisira bha yemusoro pamusoro uye task bar pazasi. PaMac OS, yakazara skrini mode inowedzera hwindo remusangano, uye bha remusoro rakavanzwa. Izvi zvinokubatsira kuti udzikise zvinokanganisa uye tarisa kutarisisa kwako. GCC chete munaNovember.
OneNote muTimu DoD
Iwe unogona ikozvino kuwedzera nyowani kana aripo OneNote Notebooks tebhu kune ako maTimu chiteshi kana iwe uri DoD mutengi. Iwe unogona zvakare kuenda kuFiles kana kuwedzera OneNote Yemunhu App kuvhura ako OneNote notibhuku zvakananga. Dzidza zvimwe.
Kudzivirira vanopinda kubva mukusadzikama muTeam Misangano
Vanoronga musangano uye varatidziri muUS Government Community Cloud vanogona kudzivirira vatambi kubva mukusazorora panguva yemusangano uye kugonesa avo vakapinda kusimudzira pavanosimudza maoko. Izvi zvinogona kubatsira kumisangano yemapepanhau uye makamuri zviitiko umo iwe unoda kuve mukutonga kwekuti ndiani arikutaura. Dzidza zvimwe.